कोरोना खोपले प्रजनन क्षमता घटाउँछ ? - Nagarik Today
होम » कोरोना खोपले प्रजनन क्षमता घटाउँछ ?
कोरोना खोपले प्रजनन क्षमता घटाउँछ ?
कोभिड १९ भ्याक्सिनका कारण प्रजनन् सम्बन्धी समस्या बढी हुने गर्छ, यसले गर्भपातको समस्या निम्त्याउँछ भन्ने जस्ता दाबीहरु सामाजिक सञ्जालमा धेरै सुन्न सकिन्छ । यस्तो दाबीमा अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिँदैन । तर यस्तो दाबी भने आइरहेको छ । चिकित्सकहरु गर्भावस्थाको समयमा कुनै पनि चिजको सल्लाह दिनभन्दा पहिले धेरै सोच्ने गर्छन् । यही कारण लामो समयसम्म गर्भवती महिलाहरुको लागि कोरोना भाइरसको खोपलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको थियो ।
तर अहिले सुरक्षालाई लिएर पर्याप्त प्रमाण भेटेपछि यो सन्देह हटेको छ । साथै, खोप लिनको लागि प्रोत्साहन पनि गर्ने गरिएको छ । किनकि कोभिडले गर्भावस्थालाई नै खतरामा पार्न सक्छ । ‘हामीले केही बलियो दाबी भेटेर नै बाहिर आएका दाबीहरु गलत हो भनेका छौं ।’ बीबीसीको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
खोप अण्डाशयमा भण्डारण हुन्छ ?
मान्छेको अण्डाशयमा खोप भण्डार हुन्छ भन्ने दाबी एक जापानी अनुसन्धानको गलत पढाइका कारण सिर्जना भएको भ्रम हो । इन्जेक्सन दिनुको ४८ घण्टापछि केवल ०.१ प्रतिशत डोज मात्रै मान्छेको अण्डाशयमा पाइएको थियो । यसको विपरीत इन्जेक्सन दिएको एक घण्टापछि ५३ प्रतिशत र ४८ पछि २५ प्रतिशतमा भ्याक्सिन केवल इन्जेक्सन दिएको ठाउँमा पाइएको छ ।
यसका अलावा अर्काे महत्वपूर्ण ठाउँ कलेजोमा ४८ घण्टामा १६ प्रतिशत भेटिएको थियो । जसले शरीरबाट खराब पदार्थलाई बाहिर निकाल्न मद्धत गर्छ । खोप बोसोको प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ । जसमा भाइरसको जेनेटिक पदार्थ सामेल हुन्छ । जसले शरीरको प्रतिरक्षा तन्त्रलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गर्छ ।
वास्तवमा मानिसहरुले जुन झूटा दाबी फैलाइरहेका छन्, वास्तवमा त्यो यही बोसोको बारेमा हो । जुन अण्डाशयमा पाइन्छ । खोप लगाएको ४८ घण्टापछि मात्रै अण्डाशयमा बोसोको मात्रा बढ्ने गर्छ । किनकि खोपको इन्जेक्सन दिने ठाउँबाट ४८ घण्टापछि मात्रै यो पूरै शरीरमा पुग्छ । तर अझै पनि हामीले महत्वपूर्ण प्रमाण भेटेका छैनौं कि यसमा भाइरसको आनुवंशिक सामग्री समेत राखिएको हुन्छ ।
खोपले गर्भपतन गराउँछ ?
सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पनि पोस्टहरु पनि सुन्न पाइन्छ कि गर्भपातको कुरा उल्लेख गरिएको यो पोस्ट भ्याक्सिन मनिटरिङ स्कीमको माध्यमबाट गरिएको थियो । यसमा अमेरिकाको भ्याक्सिन एडवर्स इक्विट रिपोर्टिङ सिस्टम समेत सामेल छ ।
खोप लगाएपछि जो कोहीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे रिपोर्ट गर्न सक्छन् । तर जोकोहीले यस बारेमा रिपोर्ट गर्ने बारेमा सोच्ने गर्दैनन् । किनकि यो आफैँले चयन गर्ने एक प्रकारको डाटाबेस हो । यस डाटाबेसमा गर्भपातको घटना रिपोर्ट गरिएको थियो, तर ती दुर्भाग्यपूर्ण सामान्य घटनाहरु थिए । यसको मतलब यो होइन कि यो खोपको कारणले भएको हो ।
इम्पेरियल कलेज अफ लन्डनका प्रजनन प्रतिरक्षाविज्ञ डा भिक्टोरिया मेल अहिलेको रिपोर्टिङ प्रणालीले भ्याक्सिनबाट हुने ठूलो साइड इफेक्टबारे पत्ता लगाउन सक्षम रहेको बताउँछन् । उनी उदाहरण दिँदै भन्छन् जस्तै एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनको कारण एक विशिष्ट प्रकारको रगतको थोपा जमेको थाहा भएको छ ।
यदि तपाईं खोप लिने मानिसमा कुनै असामान्य लक्षण भेट्टाउनुहुन्छ भने यसलाई एउटा चेतावनी मान्नुहोस् । आम मान्छेमा देखिने सामान्य साइड इफेक्टहरु जस्तो मासिक धर्ममा हुने परिवर्तन, गर्भपात र सामान्य जनसंख्यामा कार्डियोको समस्यालाई निगरानी गर्न यो उपयुक्त छैन । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने खोप लिने वा नलिनेवालामा यो लक्षण देख्नु सामान्य कुरा हो ।
यदि हामी खोप नलगाएका मान्छेको तुलनामा खोप लगाएकाहरुमा धेरै गर्भपातको समस्या पाउँछौं भने यही प्रविधिले यसको संकेत दिन्छ । कतिपयले के पनि दाबी गरेका छन् भने कोभिड भ्याक्सिन कम सुरक्षित छ । तर तथ्यांकले यो पुष्टि गरेको छैन । जबकि कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा खोप लगाइसकिएको छ ।
खोपले गर्भनालमा समस्या सिर्जना गर्छ ?
चिकित्सा विज्ञानका शोधकर्ता माइकल ईडेनको एउटा तर्कलाई विश्वभर सेयर गरिएको छ । जसमा उनको दाबी छ कि फाइजर र मोडर्ना भ्याक्सिनमा कोरोना भाइरसको त्यो स्पाइक प्रोटिन छ जुन स्यानसिटिन २ प्रोटिनको जस्तै हो । जसले गर्भनाल विकसित गर्नको लागि सहयोग गर्ने गर्छ ।उनीहरुले सोचेका थिए कि यसको कारणले एन्टिबडीले भाइरसको साथसाथ गर्भावस्थाको प्रक्रियामा समेत आक्रमण गर्छ । तर कतिपय विशेषज्ञहरु भने कोविड खोपका कारण प्रजनन क्षमतामा ह्रासको दाबी यही सिद्धान्तबाट जन्मिएको विश्वास गर्छन् । जसमा प्रमाण पाइँदैन ।
वास्तवमा सेन्सिटिन १ र कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिन अरु जस्तै प्रोटिन हो । यदि शरीरमा यो त्यति सहज ढंगले रहन सक्यो भने यसले शरीरमा एन्टिबडी बनाउँछ । तर अहिले ती सबै प्रमाणहरुले यो तथ्यलाई गलत सावित गरिसकेको छ ।
अमेरिकी प्रजनन सम्बन्धी चिकित्सक र्यान्डी मोरिस आफैं यी दाबीमाथि छानबिन गर्न चाहन्थे । त्यसैले उनले आईबीएफ उपचारको लागि आउने बिरामी माथि निगरानी सुरु गरे । उनीहरु यो जान्न चाहन्थे कि के गर्भावस्थाको लागि खोपले असर गर्छ त ?
डा मोरिसले खोप लगाइसकेको, खोप नलगाएको र पहिले नै कोरोना भइसकेको १४३ महिलामाथि शोध गरे । नतिजामा उनीहरुको गर्भावस्था सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पाइएको थियो । यो अनुसन्धान सानो आकारको थियो, तर यसले ठूलो प्रमाणको काम गरेको पाइन्छ ।
समस्या साँच्चै यो हो कि वैज्ञानिकहरु मानिसहरु लाई सन्तुष्ट गर्न को लागी प्रमाण प्रदान गर्न को लागी कोशिश गरीरहेछन्, र जब सम्म उनीहरु आफ्नो अनुसन्धान को रिपोर्ट गर्छन्, सोशल मिडिया मा मानिसहरु अर्को मुद्दा मा सारिएको छ। ‘अफवाहहरु को बारे मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा जतिसक्दो चाँडो यसलाई खारेज गर्नु हो, तब तपाइँ गोलपोस्ट बदल्नुहोस्,’ डा मोरिस भन्छन् ।
coronacovid 19प्रजनन क्षमता